I-New York Subway, evela Amehlo oMfoti u-Andre D. Wagner | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iminyaka yokuBhala iNew York Subway: Umsebenzi woMfoti u-Andre D. Wagner
Ifoto Kufuneka unyamezelo ukuze ukwazi ukuthatha ezona foto zibalaseleyoUbuncinci ukhethe ezo ziphumayo kwezinye izinto esizenzileyo iminyaka. Ukuzingisa sisixhobo esilungileyo esihlala sixhomekeke kumnqweno wethu wokufezekisa iziphumo ezingcono, ezinokuthi kuthi ngomonde omncinci izinto ezininzi zibe nokufezekiswa ebomini bethu.
Le yimeko yomfoti u-Andre D. Wagner, owathi kwincwadi yakhe yokuqala ethi Here for the Ride, usithatha phambi kokudityaniswa okuhle kweefoto zedolophu yaseNew York amaxesha amaninzi i-cinema izise kwiscreen. Inyani yile yokuba umfoti wafota indlela yakhe yemihla ngemihla yokuba lithuba, kuba waqala ukubhala phantsi zonke ezo ntsuku xa wayekhwele kuloliwe ohamba ngaphantsi komhlaba esuka ekhaya esiya emsebenzini.
Oku kwavela kwimonograph, ethi iqulethe imifanekiso engama-62 ebonisa imbali yobomi besixeko, nangaphezulu kwesinye esikhulu nesikhethekileyo njengeNew York.
Ukususela ngo-2013 ukuya ku-2016 Wagner waqhubeka nomsebenzi wakhe Ndiyaqhubeka nesiko labafoti abafumene i-Big Apple. Umsebenzi wakhe uphawulwa ngombala omnyama nomhlophe, ifomathi apho umfoti afanelekileyo kwaye nayiphi na imifanekiso engama-62 inokuchaza.
Njengoko esitsho ngokwakhe, uyayithanda imvisiswano eveliswa yi-monochrome, Kwaye akukho nto iya kujongeka njengokunyaniseka njengoprinta kule mibala mibini. Njengabo akhuthazwe ngabo, abanjengoRoy DeCarava okanye uRobert Frank, ulandele ekhondweni lakhe elimnyama nelomhlophe.
Umsebenzi ubonwa kwi Incwadi yakhe yokuqala inengxelo enamandla kunye nokuzama ukukhupha umphefumlo abakhweli abafunyenwe kwimoto enye. Njenge-capsule yexesha, le mifanekiso ibuyela kuloo minyaka apho uWagner abonisa indlela yakhe yemihla ngemihla kweso sixeko sikhulu kwimifanekiso.
Ungamfumana kwakhona kwiwebhusayithi yakho, okanye Kwi-instagram yakhe. Njalo uya kuba nethuba lokubuyela kwixesha elidlulileyo nge igalari yoluntu ekwi-intanethi yeNew York.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Iminyaka yokuBhala iNew York Subway: Umsebenzi woMfoti u-Andre D. Wagner
Isitayile seZombie sokuphinda ubambe umfanekiso kunye neAdobe Photoshop
Iimpawu zePop zenkcubeko eziqoshwe kumathanga eHalloween